သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေ Rework ဘူတာ -> Hot Air လေကြောင်းလိုင်းဘူတာ
ကျနော်တို့၏ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူများမှာ Hot Air လေကြောင်းလိုင်းဘူတာ။ အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်တွင်းစျေးကွက်တစ်လျှောက်လုံးကောင်းစွာ accessSelling နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတစ်လွှားဖောက်သည်ထံမှဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီ, စသည်ကြည်ညိုအတွက်ဖောက်သည်များကကြိုဆို Taiwan။ ကျနော်တို့ဘုံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပို clients များနှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအရာကိုမှအကြိုးခံစားဖို့ဒီနေ့။
မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်ရှိကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ prompt ကိုပို့ဆောင်မှုနှင့်ထိရောက်စွာဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ဖို့နဲ့တပြိုင်နက်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ကြီးမြတ်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်စိတ်ပျက်ဘယ်တော့မှရလိမ့်မည်။
1. ပိတ်ထားသော loop ပတ်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု, အဆက်မပြတ်အဆက်မပြတ်အပူချိန်ထောက်ပြကြပါတယ်။
2. ESD ဘေးကင်းလုံခြုံလက်အပိုင်းအစ။
3. မော်တော်ကားချအအေး system.The system ကိုအလိုအလျှောက်ကိုပိတ်ပစ်ရှေ့တော်၌ထို nozzle အတွင်းအပူထုတ်ထားပါတယ်။ ဤသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာနှင့်အပူဒြပ်စင်၏အသုံးပြုမှုဘဝရှည်။
ကျော်-အပူ 4. အပူချိန် system ကိုနှင့်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ကျော်ထကြသောအခါ၏အပူဒြပ်စင်များကို auto ပိကာကွယ်စောင့်ရှောက်။
nozzle အမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတ 5. ။
6. အနိမျ့ဆူညံသံပျော့လေကြောင်းရန်စီးဆင်းမှု, တောင်မှအပူချိန်ခဲအခမဲ့ဂဟေနှင့် desoldering သင့်တော်သည်။
7. အထူးသဖြင့်တော့ Micro BGA နှင့် SMD အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းအလုံးစုံတို့အဘို့နိုင်ပါတယ်သင့်လျော်သော။
8. ပူလေကြောင်း smd rework ဘူတာရုံ High-တိအပူချိန် Controller ကို၏ဖြစ်ပါတယ်။
9.့Dexter ကြက်သရေကိုင်တွယ်ယင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုငြီးငွေ့မခံစားရပါဘူး။
ဂဟေ 10. အများစုကမျိုးသင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဆင်ပြေအစားထိုးသွားမှာပါ။
1. မဆို Inquirer 24 နာရီအတွင်း replied လိမ့်မည်။
2. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကြည့်ရှုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
3. တင်ပို့မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် 100% စစ်ဆေးရေးအားလုံးသည်, ငါတို့ထုတ်ကုန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအသုံးပွုဖို့အာမခံပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုပိုင်ဆိုင်တယ်။ မည်သည့်ပြဿနာမျှဖြစ်ပျက်ရှိလျှင်, ငါတို့သည်ဖောက်သည်တွေအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုလိမ့်မည်။